Jowhar: Munaasabada Caleemo Saarka Maamulka cusub ee Hir-shabeelle – VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Jowhar: Munaasabada Caleemo Saarka Maamulka cusub ee Hir-shabeelle – VIDEO
Jowhar: Munaasabada Caleemo Saarka Maamulka cusub ee Hir-shabeelle – VIDEO
October 22, 2016 - By: HORSEED STAFF
Waxaa maanta magaalada Jowhar ee xarunta Shabeele Dhexe lagu qabtay xaflada caleemo saarka Maamulka cusub ee Hir-shabeelle, waxaana ka qeyb galay xafladaasi Madaxweynaha Dowlada Federaalka Xassan Shiikh Maxamuud, mas’uuliyiin ka socota maamulada dalka ka jira iyo marti sharaf kale oo ay kamid ahaayeen Wakiilka Qaramada Midoobay iyo Safiiro.
Madaxweynaha Maamulka Hir-shabeelle Cali Cabdullahi Cosoble ayaa khudbadii uu halkaasi kasoo jeediyey uga hadlay arrimaha horyaal oo ay kamid tahay dhameystirka maamulka iyo waliba soo xulida Xildhibaanada mateli doona gobalada Hiiraan iyo Sh/Dhexe ee Aqalada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Mudane Cosoble ayaa sheegay in waxa ugu horeeya oo ay ka shaqeyn doonaan ay tahay amniga iyo cadaalada, isagoo sidoo kale ugu baaqay in maamuladii ka horeeyey ee dalka ka jira gacan kasiiyaan arrimahaasi.
Kulanka Jowhar ayaa waxaa ka maqnaa Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo isagu ku sugan magaalada Beledweyne isla markaana kasoo horjeestay dhismaha maamulka Hir-shabeelle. Madaxweyne Cosoble ayaa saaka dib uga noqday magaalada Beledweyne kadib markii uu kulamo la yeeshay Ugaas Khaliif, walow ay muuqato inuu ku fashilay inuu ka dhaadhiciyo hogaanka dhanka ee Beesha uu kasoo jeedo inay ka qeyb galaan xaflada maanta ka dhaceysay magaalada Jowhar.
Madaxweyne Cosoble ayaa khudbadiisa ku sheegay in shacabka gobalka Hiiraan ay taageersan yihiin Maamulka Hirshabeelle isla markaana aysan caqabad ku noqon doonin qorshaha dhameystirka maamulada Federaalka ee dalka Soomaaliya laga hirgelinayo.